mercredi, 27 janvier 2021 19:04
Betaimborona Mampikony : Tratra ireo omby 4 halatra
Voasavan'ireo Zandary nanao fanamarinana ireto omby 4 izay tsy nisy taratasy teo Ambohitoaka Betaimborona, Kaominina Ankiririky, Distrika Mampikony ny 25 janoary lasa teo. Rehefa nofotorana ilay nandroaka ny omby dia nanambara ny namany, izay tafatsoaka. Fantatra fa nangalarina tany Mahajamba ireto omby ireto, ary dia nohazonina ao Mampiokony aloha ny omby mandram-pahatongan'ny tompony. Mitohy ny fikarohana ireo izay niaraka nangalatra ireto omby ireto. (Jereo Sary Tohiny)
mercredi, 27 janvier 2021 18:04
Vinaninkarena Antsirabe : 280l toaka gasy sy 1 taonina vato malakita tratra tanaty saribao
Fiara Mercedes iray no voasakan'ny Zandary teo amin'ny PK 176 lalam-pirenena faha-7 Vinaninkarena Antsirabe ny alatsinainy 25 janoary tokony tamin'ny 7ora30 hariva, rehefa nosavaina ny entana noentiny dia nahitana zerikanina 4 misy 30 litatra toaka gasy, zerikanina 08 amin'ny 20litatra, vato malakita 1 taonina, izay nafenina tao ambany gonitsaribao. Avy any Manandriana ho any Antananarivo ity fiara ity ka dia notazonina ambalam-pamonjana fiara ao Antsirabe. Efa noraisan'ireo tompon'andraikitra isan-tokony ny fanohizana ny fanadihadiana momba ireto tsy fanarahan-dalàna ireto. (Jereo Sary Tohiny)
dimanche, 24 janvier 2021 19:21
Governoram-paritra : Tsy maintsy mahavita lalana 200km hatramin'ny 250km isan-taona
Tonga nandray ireo fitaovana vaventy fanamboaran-dalana ahitana "niveleuses", "bulldozers", "compacteurs", "citernes" ary "chargeuses" tao amin'ny seranan-tsambon'i Toamasina, androany 24 janoary 2021, ny Filoha Andry Rajoelina. Fanamby napetraka hoy i Andry Rajoelina ny tsy maintsy hanamboaran'ireo Governoram-paritra lalana 200km hatramin'ny 250km isan-taona. Ireo lehiben'ny faritra araka izany no tompon'antoka amin'ireo asa fanamboarana isaky ny faritra iadidiany. Andiany voalohany ireo, ary ny faritra SAVA, Androy, Analamanga, Bongolava, Vakinankaratra, Boeny, Vatovavy Fitovinany ary Analanjirofo no hisitraka azy ireo. Ireo andiany faharoa kosa dia higadona amin'ny volana martsa ho avy izao. (Jereo Sary Tohiny)
dimanche, 24 janvier 2021 14:11
Fiaraha-monina : Nodimandry i Bernard
RAKOTOVAO Bernardin, 76 taona, teraka ny 28 avril 1944 tao Ambilobe. Comptable ny asany. Olona mpankafia fanatanjahantena be izy, mpilalao matihanina tao tamin'ny équipe CONIOR tamin'izany fotoana. Arbitre ary entraineur de foot koa izy. Mampianatra baolina kitra ny ankizy tao amin'ny quartier avenir Diego izy. Efa niandraikitra ny fokontany Avenir ihany koa izy. Musicien professionnel i Bernard, mahay mitendry batterie sy instrument à vent (clarinette, trombone, ...) ary efa fanfare n'ny Faritany tao Diego. Olona tia miaina izy, nahay mandihy be izy, indrindra ireo dihy fahiny toy ny valse, passo, tango...).
vendredi, 22 janvier 2021 21:15
Tetezan'ny Bemanta (RN35) : Mpampianatra iray amin’ny liseam-panjakana maty notifirin’ny jiolahy
Namoy mpampianatra mpanabe ny Lycée Bemahazemona Ambondromisotra, Distrika Ambatofinandrahana. Maty notifirin’ny jiolahy tamin’ny basy ny mpampianatra Histo-géo iray ao an-toerana, fantatra amin’ny anarana hoe : Ramose Haja. Nanao taingin-telo tamin’ny moto izy sy ny vadiny ary ny zanak’izy ireo lahikely. Avy namonjy fandevenana tany Fianarantsoa izy telo mianaka, ary andalana hiazo an’i Ambondromisotra no notifirin’ny jiolahy nony teo amin’ny tetezan'i Bemanta, amin’ny lalam-pirenena faha-35, androany maraina. Maty tsy tra-drano ilay ramose, nitondra ny moto ; naratra avokoa ny vady aman-janany. Nalefa notsaboina tao amin’ny hopitaliben’Ambositra ireto farany.
vendredi, 22 janvier 2021 14:27
Mahaiza Betafo : Voasambotra ireo jiolahy 6 nangalatra ny “coffre” Kaominina
Saron'ny Zandary avy ao amin'ny Tobim-paritry ny Zandarimariam-pirenena ao Betafo ny andron'ny 20 janoary 2021 ireo jiolahy namaky ny Kaominina Mahaiza, Distrika Betafo, ka nangalatra ny vata fitehirizam-bola “coffre” milanja 150kg eo, ny alin'ny 17 hifoha 18 janoary lasa teo. Nisy vola mitentina 742 200 Ariary, solosaina fitondra iray, fahana telma maro tsy mbola niasa, taratasim-bola sy faktiora ary fitomboka maro tao anatin’ilay fitehirizam-bola. Nidina ifotony ny Zandarimaria nanao fizahàna sy nanokatra fikarohana ny 18 janoary 2021. Natao ny fanarahan-dia ka tany amin'ny 3 km niala ny biraon’ny Kaominina no hita ilay "coffre", izay efa vaky, ary tsy tao intsony ireo rehetra tao anatiny. Voasambotra avokoa ireo nahavanon-doza, miisa enina, dia ireo nanatontosa ny vaky trano sy ny mpividy halatra, ary tafaverina avokoa ireo entana halatra sy ny ampaham-bola tsy lanin'izy ireo. (Jereo Sary Tohiny)
mercredi, 20 janvier 2021 18:50
Ambano-Antsirabe II : Vehivavy iray maty tsy tra-drano voahitsaky ny kubota
Vehivavy iray manodidina ny 35 taona any ho any no maty voahitsaky ny kubota tamin'iny lalàna mihazo an'Ambano iny. Raha ny fanazavana azo dia samy hizotra hihazo an'Antsirabe, na ilay vehivavy, na ilay kubota, saingy nisy bisikileta iray nifanena ka nandona ilay ramatoa nitaingina biskileta hafa ka nampianjera azy tao ambanin'ilay kubota, ary naha voahitsaka ny lohany. Novonjen'ny olona nentina nihazo ny mpitsabo ihany ilay ramatoa saingy tsy tana ny ainy. Efa eo am-panaovana fanadihadiana ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana. Mahazo vahana aty Antsirabe amin'izao fotoana ity karazam-pitanterana kubota ity amin'ny fitaomana biriky, ary olana ho azy ireo ny tsy fahafehezana ny lalanan'ny fifamoivoizana. (Jereo Sary Tohiny)
Fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny Taom-pambolen-kazo 2021 tao Manatantely, Taolagnaro, ny talata 19 janoary 2021 nanamarika ny faharoa taona nandraisan’i Andry Rajoelina ny fitarihana sy fitantanana ny Repoblikan'i Madagasikara. Tendrombohitra avo dia avo no niakarana, nambolena zanakazo miisa 6 000 fototra ho fanombohana ny asa fanarenana amin'ny laoniny ny alan'i Tsitongambarika, potika noho ny fandripahana sy ny fandorana ny ala. Ny alan'i Tsitongambarika no misy ireo loharano mamatsy rano an'i Taolagnaro sy lay « cascade » Manatantely izay efa nanomboka nihena be ihany koa. "Mila miara-mientana isika Malagasy rehetra hanatanterahana ny vina « Madagasikara rakotr’ala ». Ary tsy ampy ny manatsato-kazo fa mila fanaraha-maso sy fikolokoloana ary fiarovana ny hazo volentsika mba tena ho tonga ala", hoy ny Filoham-pirenena. Ny Ministeran'ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy dia manohy ny ezaka natomboka tamin'ny 2020, ary nampitombo ho 75 000 ha ny velarana horakofana ala amin'ity 2021 ity.
mardi, 19 janvier 2021 13:11
Toamasina : Ravan’ny zandary ny tambazotra mpanaparitaka vola sandoka
Jiolahy mpanao sy mpisera vola sandoka miisa 6 sy ramatoa roa no voasambotry zandary tao antampon-tanàn'i Toamasina ny 18 janoary 2021. Efa amam-bolana maro no niasan’ity tambazotran-jiolahy mpanao sy manaparitaka vola sandoka ity tamin'iny faritra Antsinanana iny vao izao sarona izao. Teo Barikadimy no sarona ny iray tamin'ireo jiolahy niaraka tamin'ny lelavola sandoka 20 000 Ariary miisa 750 izay mitotaly 15 000 000 Ariary. Taorian'ny famotorana azy no nanaborahany ireo mpiray tambazotra aminy, ka vehivavy roa sy jiolahy dimy hafa no voasambotra tsirairay tamin'ny toerana samihafa tao Toamasina. Anatin’ny famotorana azy ireo ny Zandarimaria amin’izao. (Jereo Sary Tohiny)
mardi, 19 janvier 2021 13:10
Sary : Polisim-pirenena
Tarandy – Amboasary Atsimo : Polisy miisa roa naratra mafy voan'ny balan'ireo dahalo
Nisy fanafihan-dahalo nitranga tao Tarandy Kaominina ambonivohitra Amboasary Atsimo omaly Alatsinainy 18 janoary 2021. Nidina ifotony avy hatrany ny Polisy ao Amboasary Atsimo vao nahazo antso avy amin'ny Fokonolona. Dahalo anefa no nitsena sy nanao tifitra variraraka azy ireo. Polisy roa no naratra mafy vokatr'izay, ka ny iray voan'ny bala teo ambanin'ny fony, ary ny iray hafa kosa dia nivoaka teo amin'ny lamosiny ny bala. Tonga tany an-toerana ny Minisitry ny fiarovam-pirenena sy ny Minisitry ny filaminam-bahoaka nijery sy nikarakara ireo Polisy naratra, ary nanome baiko hisambotra faran'izay malaky ireo dahalo ireo. (Jereo Sary Tohiny)